MACALIN AJNABI AH OO LAGU DILAY MAGAALADA KAALKACYO | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka MACALIN AJNABI AH OO LAGU DILAY MAGAALADA KAALKACYO
MACALIN AJNABI AH OO LAGU DILAY MAGAALADA KAALKACYO
Macalin u dhashay dalka Kenya, oo lagu magacaabi jiray Keneth Mwenga oo in muda ah ku sugnaa magaalada Kalkacya ee dalka Soomaaliya ayaa lagu dilay magaaladaas, xili uu kasoo baxay goob waxbarasho oo uu Macalin ka ahaa.
Keneth Mwenga ayaa ahaa 50 sano jir Macalin ka ahaa College lagu magacaabo Vission College oo ku yaalo magaalada Kalkacya, iyada oo milkiilayaasha College-ka ay macalinka si qandaraas ah ay uga keensaday dalka Kenya.
Macalinka ayaa geeriyooday kadib markii rag hubeysan ay xabado ku fureen isaga oo ku sugnaa afaafka hore ee Collegeka. Ragga falka geestay ayaa goobta iskaka carareen kadib markay fuliyeen howshii ay damacsanaayeen.
Magaalada Kalkacya ayaa horay waxaa loogu dilay laba nin oo ajaanib ah kuwaas oo u dhasheen dalalka Yurub, iyaga oi ku sugnaa gagida dayuuradaha ee magaalada Kaalkacyo.
Iyada oo nimankaas uu toogtay nin ka mid ahaa shaqaalaha gagida dayuuradaha ee magaalada Kalkacya, ayaa waxaa xiligaas ka hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdi wali Mohamed Ali Gaas oo kolkaaw xilka la wareegay.
Si kastaba ha ahaate, waxaa loo maleynaa in dilkani la xariiro howlgalada ciidamada Kenya ay ka wadaan xaafada islii ee magaalada Nairobi taas oo ay aad u daganyihiin Soomaali fara badan kuwaas oo dhibaatooyin aad u daran kala kulmayay ciidamada dalka Kenya, iyaga oo marar badan xirxireen dad Soomaali ah oo aad u fara badan isuguna geeyeen garoonka kubada cagta ee kasaraani, halka kuwa kalana lagu hayo xabsiyo kala duwan oo gudaha Kenya ah.
Mas’ uul ka tirsan maamulka Puntland oo ka hadlay dilka macalinka ayaa sheegay in lagu daba joogo raggii falkaan geestay, ayna ku hoolan yihiin sidey usooo qaban lahaayen.
Mar wax laga weydiiyay in arintani la xariirto dhibaatada lagu hayo Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya ayuu ka gaabsaday mudanahaan isga oo sheegay in uusan xaqiijin karin xariirka ka dhaxeyn karo.
Sidoo kale waxaa wax laga weydiiyay maamulka Puntland sida uu u arko falalkaan amni daro ee in badan kusoo laa laabtay gobalada Puntland ayuu carabka ku adkeeyay in ay aad uga xun yihiin maamul ahaan dilalka ajaanibta ee kadhaca Puntland ayna wax badan ka qaban doonaan.
Previous articleIlaa 41 Xildhibaan oo Gudoomiyaha Baarlamaanka u gudbiyay baaq ah in Madaxweynahu iscasilo
Next articleWAR DEG DEG AH: ITOOBIYA OO MUUJISAY IN AY KA TALISO BAY IYO BAKOOL